HIT Solar ၏အဓိက အသုံးဝင်မှုကတော့ လျှပ်စစ်အလွယ်တကူ မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်ကို ရယူ အသုံးပြုရတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Solar ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာလည်းကျပါတယ်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ ဓါတ်ဆီ အင်ဂျင်ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် စက်ကထွက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေက လေထု ကို တိုက်ရိုက် ညစ်ညမ်းစေပါတယ်။ Solar ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ လျှပ်စစ်ကိုလည်း အသုံးပြုရမယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း ကာကွယ်ပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ နေအိမ် နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လင်းလက်တောက်ပစေမယ့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး SOLAR ကို အသုံးပြုပါလို့ ပြောပါရစေ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးတဲ့ Solar ကြောင်းကို တင်ပြပေးချင်ပါသည်။ Solar ဟာဆိုရင် လျှပ်စစ်မရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ လျှပ်စစ်ကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ထိန်းသိမ်းကွာကွယ်ရာလည်း ကျပါတယ်။ ရွာတွေမှာဆိုရင် ညရောက်တာနဲ့ ဖယောင်းတိုင်၊ ရေနံဆီသုံး မီးအိမ်တွေကို ထွန်းပြီး မီးအလင်းရောင်ကို ရယူရပါတယ်။ ရရှိတဲ့မီးအလင်းရောင်ကလည်း ပြည့်ဝမှု မရှိပါဘူး။ ဆိုလာ၊ ဆိုလာနဲ့တွဲရပ်ပါ ဘက္ထရီ၊ LED မီး ဆိုရင် မီးအားလည်း အရမ်းမစားသလို မီးအလင်းရောင်ကိုလည်း အပြည့်အဝ ရရှိပါတယ်။ မိသားစုတိုင်းအတွက် နေမင်းပမာထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Solar ကို အသုံးပြုကျစို့။
- ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းယူကြည့်ရှု့နိုင်သည်။ - TV, DVD, EVD, Blueray နှင့် တွဲ၍ သုံးနိုင်သည်။ - HDMI တွဲသုံးနိုင်သည် - SD Card နှင့် လည်း ကြည့်ရှု့နိုင်ပြီး - Computer နှင့် တွဲ၍အသုံးပြုနိုင်သည်။
- Advanced Hybrid System:6Outside (CO) lines - 16-port Hybrid Extensions max. 8 Outside (CO) lines, 24-port Extensions
ဆိုလာစနစ်သည် နေရောင်းခြည်စွမ်းအင်သုံးဖြစ်၍ နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်ရှိနေသရွေ့ မကုန်ခမ်းနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်အလင်းရောင်မှလွဲ၍ အခြားလောင်စာဆီများ မလိုအပ်သောကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာပြီး ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်းကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Dulas Solar ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
GG-35-SPS SOLAR DC LIGHTING SYSTEM ဆိုလာ
<p>BaganMart.com is No.1 B2B eCommerce platform to buy Electrical Components in Myanmar. You can buy and sell switch,circuit breaker,electrical socket,extension USB port in Myanmar.&nbsp; You can order from online or just see information here and buy directly from their showroom. You can order from BaganMart in express order or negotiate price in quotation process. If you cannot find what you want, you can post buying offer in relevant categories. Many suppliers will send you quotations. You just select the best one and choose it. Then, you can give review good or bad.<br></p>